Garoonka Stadium Muqdisho Oo Muddo 16-Sano Kadib Lagu Ciyaari Doono & Faah- | Laacibnet.net
Garoonka Stadium Muqdisho Oo Muddo 16-Sano Kadib Lagu Ciyaari Doono & Faah-
June 29, 2020 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO"
Naadiyada MCC iyo Horseed SC ayaa ku loollami doona cayaarta dib u furitaanka garoonka oo dhici doonta maalinta talaadada ah ee inasoo aadan oo bisha June tahay 30. Labada koox ayaa hada kaalimaha hore kaga jira horyaalka SPL waxaana xiriirku go’aamiyay in labadoodu dheelaan cayaarta ugu horeysa maadama ay horyaalka ugu sareeyaan hada socda.
Waxaa loo dhigi doonaa koob hal maalin ah oo ujeedadiisu tahay in lagu maamuuso dib u howl-gelinta garoonka Muqdisho oo ah hoyga xulka qaranka Soomaaliya.
Wasiiradda dhallinyarada iyo cayaaraha Marwo Khadiija Maxamed diiriye iyo guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab yaa goobta cayaarta kusoo dhaweyn doona madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed oo laadi doona kubbada ugu horreysa cayaarta.
Guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta dalka Cabdiqani Saciid Carab ayaa sheegay in dib u howl-gelinta garoonka loo aqoonsan doono tallabadii ugu weyneyd ee dhinaca horumarka kubbadda cagta ah ee sanadka 2020-ka. Wuxuu guddoomiyuhu uga mahadceliyay dowladda Soomaaliya in ay garoonka kusoo celisay gacanta shacabka Soomaaliyeed.
“Garoonka Muqdisho hadda waa diyaar, xiriirka kubabdda cagta Soomaaliyana wuxuu aad ugu faraxsan yahay in uu shaaciyo in xulka qaranka Soomaaliya ay mustaqbalka dhaw ku cayaari doonaan gurigooda. Garoonku wuxuu sidoo kale marti gelin doonaa cayaaraha kale ee xiriirku qabto”ayuu yiri guddoomiyaha xiriirka kubbada cagta dalka oo sheegay in sidoo kale xarunta xiriirka laga dhisi doono meel aan ka fogeyn garoonka iyadoo dhaqaalahana ay bixin doonto hey’ada FIFA.
Garoonka kubbadda cagta Muqdisho oo ah guriga xulka qaranka Soomaaliya, waxaa la dhisay sanadku markuu ahaa 1977-kii waxaana dalka Soomaaliya u dhistay dowladda Shiinaha. Garoonku wuxuu marti geliyay cayaaro badan oo isugu jira kuwo qaaradeed, kuwo heer caalami ah, cayaraha bariga iyo bartamaha Africa iyo sidoo kale cayaaraha Carabta.
Kooxihii xilligaas ka qeyb galay horyaalka dalka waxay kala ahaayeen: Banaadir Telecom oo hadda ah MCC, Elman, SITT oo hadda ah Saxafi FC, Dekedda, Suppershel oo hadda ah Gaadiidka,Feynuus oo hadda noqotay Horseed, Badbaado iyo Gasco.
zaki yare says:
m.a waa wax lagu farxo wan zoo dhaweynayaa stadium muqdiso
waxanan rajaynana in xulka somaliya kugulayaso taratankasta oukumartigaliyo
Liban shabeel says:
Runtii waa arin ad u farxad badan waayo ma aanan arag garoon dhisan oo kubada cagata lagu ciyaaro oo caalim ah si ku meelgaar ah ayan wxn u tagi jiranay garoma ay ka mid yihiin kan jaamacadaha iyo kan banaadir. Wxn leeyahay hormar wcn stadium mogadisho. 🥰🥰🥰😪😪😪 farxad ban la ooynayaa runtii Allow nabad nasii waana jeclahay kubada cagta
Liyoo garad says:
Ugu dambeen waan helnay rajadii aan sugeenay waan soo dhaweehena in aan soo daawano oo ku dhiiri galino dhalinta ku ciyaareysa kuwa noo dhisay iyo kuwa gacan kaqaatay waad mahad santihiin waa farax sannahay ❤❤